musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Great Britain yakagadzirira kushanya boom muna 2022
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Kuvhurwazve kwekufamba pakati peUK, Europe neUS kunopa tariro yekudzoreredzwa kwekushanya - kunyanya sezvo 2022 ichaona mukana unoshamisa wepasi rose weUK.
Kwekuenda, vatengesi uye zvinokwezva muUK zvakagadzirirwa kuona kupora kwakasimba muna 2022, nekuda kwevanopinda mukati uye vekumba kwevaenzi vezororo kutsvaga maBritish Isles, inoratidza tsvakiridzo yakaburitswa nhasi (Muvhuro 1 Mbudzi) kuWTM London.
Vanenge mumwe muvatanhatu veBrits (16%) vanoti vanoronga kubhuka pekugara muna 2022 - kunyangwe kudiwa kwakawanda kwezororo rekunze sezvo nzendo dzekunze dzinogona kupora muna 2022 - nepo vatengi vekune dzimwe nyika kuWTM London vachishuvira kuisa zvibvumirano zvezvigadzirwa zveUK.
Zvakawanikwa, kubva kuWTM Indasitiri Report, zvichave kukurudzira kunogamuchirwa kwevaratidziri veUK kuWTM London, avo vanozove neshungu dzekuwana mukurumbira wekushanya kwemumba uye kudiwa-kwepamusoro kwevashanyi vekune dzimwe nyika kuti vadzokere kuBritain.
Nhamba idzi dzinobva kusarudzo mbiri dzakatumirwa neWTM London - yekutanga yakabvunza vatengi 1,000 uye vakawana kuti 843 vari kuronga kutora zororo muna 2022. Chikamu chechitanhatu (17%) cheivava vanoti vachatora pekugara.
Ongororo yechipiri yakataura ne676 nyanzvi dzekutengeserana ndokuona kuti vanopfuura hafu (58%) vanofarira kutora chibvumirano chezvigadzirwa zveUK kuWTM London 2021, kana vakapinda. Kuparara kwenhamba kwakaratidza kuti 38% 'vaida zvakanyanya' uye 20% 'vaifarira'.
Pavakabvunzwa nezve dzimwe nzvimbo kana matunhu, London ndiyo yainyanya kufarirwa, asi huwandu hwakasiyana hwevamwe hwakataurwawo nevapinduri, kusanganisira dzimwe nzvimbo dzeEngland (seDevon, Cornwall, Kent neManchester) pamwe neScotland, Ireland neWales.
Varatidziri vakasiyana-siyana vane zvido uye zvigadzirwa muUK vachange vari kuExCeL - London yeWTM London svondo rino (Muvhuro 1 - Chitatu 3 Mbudzi), kusanganisira tourism association European Tour Operators 'Association; kambani yekuhaya murairidzi Abbey Travel; Dover District Council, inomiririra White Cliffs Country; London neUK kushanya nyanzvi yeGolden Tours; uye Merlin Attractions, ine nzvimbo dzakawanda muUK, dzakadai seLegoland Windsor, Alton Towers Resort, Warwick Castle, Madame Tussauds uye London Eye.
Tsvakiridzo yega yeMerlin Attractions inoratidza kuti vatengi muUS neUK vakagadzirira kudzokera kumitambo yepaki "mumapoka avo" nekuda kwechiitiko che'JOLA' - Mufaro weKutarisa Mberi.
Mushure memakore akati wandei akaoma, mhuri nemapoka arikuda kubhukira kumberi kuti atarisire kuenda kune imwe nguva uye kupedza nguva pamwe chete, maererano nehofori inokwezva.
Kushanya Britain yakafanotaura kupora kunonoka kumberi, iine nzvimbo yakawanda yekubata mushure memakore maviri ekufamba kwakaganhurirwa zvakanyanya.
Inofungidzira kuti mhiri kwemakungwa kushandiswa kwevashanyi muUK muna 2021 kwaingova 5.3 bhiriyoni, zvichienzaniswa ne28.4 bhiriyoni muna 2019.
Inbound trade association UKinbound yakakurudzira makurukota mukati medenda iri kuti varatidze dambudziko renhengo dzayo, vazhinji vacho vakaona mari yadzikira ne90% kana kudarika.
Nekudaro, kuvhurwazve kwekufamba pakati peUK, Europe neUS kunopa tariro yekudzoreredzwa kwekushanya - kunyanya sezvo 2022 ichaona mukana wakakura wepasi rose weUK. Ichatambira nekupemberera Mitambo yeCommonwealth muBirmingham, Mutambo UK 2022 uye Queen's Platinum Jubilee.
Simon Press, WTM London Exhibition Director, akati: "Zvakawanikwa zvinoratidza kuti kuchave nekutengesa nekukurumidza kune varatidziri veku UK kuWTM gore rino - vachada kutora mukana wekufarira kutsva kwekuzorora mukati memusika weBritish pamwe nekugadzira. Zvibvumirano zvakawanda zvichaitwa nevatengi vepasirese, vane shungu yekubatana nevatengesi mushure mekuzorora kwezororo kuUK. "